Hery miasa mangina miparitaka amin’ny manodidina
Ka amin’izany zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin’ny fampianaranao maneho ny tsi-faharatsiana, ny fahamaotinana, ny teny tsy misy kilema, izay tsy azo tsiniana, mba ho menatra izay manohitra, satria tsy hisy ratsy hitenenany anareo. Tit. 2:7,8
Ny fifianan’i Kristy dia hery miasa mangina mivelatra hatrany sy tsy misy fitsaharana , hery miasa mangina izay namatotra Azy tamin’Andriamanitra sy tamin’ny fianakaviamben’ny olombelona iray manontolo. Tamin’ny alalan’ni Kristy no nanomezan’Andriamanitra hery miasa mangina ho an’ny olombelona izay tsy ahafahany mivelona ho an’ny tenany manokana . Isika tsirairay avy dia mifandray amin’ireo mpiara-belona amintsika, izay ampahany amin’ny ankohonana lehiben’Andriamanitra , ka samy manana adidy amin’ny tsirairay. Tsy misy olona afaka hihataka amin’ny mpiara-belona aminy, satria ny mahasoa ny tsirairay dia misy fiantraikany amin’ny sasany. Fikasan’Andriamanitra ny tokony hahatsapan’ny tsirairay fa ilaina amin’ny mahasoa ny hafa izy, ka tokony hiezaka ny hampitombo ny fifaliany (...).
Eo amin’ny tontolo manodidina antsika, ny olona tsirairay mifandray amintsika dia ho voakasika, na tsapany izany na tsia (...).
Ny tenantsika , ny fihetsitsika, ny fitondran-tenantsika, eny fa na dia ny endriky ny tavantsika aza, dia misy hery miasa mangina avokoa (...). Raha toa ka manampy ny hafa hikolokolo foto-kevitra tsara amin’ny alalan’ny ohatra asehontsika isika, dia manome hery ahafahany manao ny tsara. Avy eo dia izy ireo indray no mampiasa hery miasa mangina amin’ny hafa, ary ireo koa amin’ny olon-kafa indray. Amin’izay, amin’ny alalan’ny hery miasa mangina tsy tsapantsika, dia olona an’arivony maro no mety ho voatahy (...)
Manana hery ny toetra. Mitondra hery miasa mangina tsy hay tohaina ny fijoroana ho vavolombelona manginan’ny fiainana marina, tsy misy fitiavan-tena ary araka an’Andriamanitra. Amin’ny fanehoantsika ny toetran’i Kristy eo amin’ny fiainantsika no iarahantsika miasa Aminy eo amin’ny asa famonjem-panahy. Amin’ny fanehoantsika ny toetrany eo amin’ny fiaintsika irery ihany no ahafahantsika miara-miasa Aminy. Ary arakaraka ny mampivelatra ny sehatry ny hery miasa manginantsika no ahafahantsika manao ny tsara misimisy kokoa. Rehefa manaraka ny ohatr’i Kristy ireo izay mitonon-tena fa manompo an’Andriamanitra, ka mampihatra ny foto-kevitry ny lalàna eo amin’ny fiainany andavanandro; rehefa ny hetsika tsirairay no mijoro ho vavolombelona fa tena tia an’Andriamanitra sy tsia ny namany tahaka ny tenany izy ireo, dia hanana fahefana hanozongozona izao tontolo izao ny fiangonana.